Isu munguva pfupi yapfuura takaburitsa infographic pane yekutsvaira kwekutsva uko vatengi vari kuramba kuramba vachibhombwa neongororo. Pane zvitsitsinho zveichi kuongorora kukuru kunopihwa neemailionvision nezvekuti kubhomba vatengi kunogona sei kukonzera kutsamwa kwechiratidzo. Tsvagurudzo yeYouGov neye Emailview yakabvunza vatengi maonero avo pane tsamba dzekutengesa, uye inojekesa zvisirizvo nezvevashambadzi vangave vari kutora izvo zvinogona kuunza chigumbu. Chidzidzo chakawana: 75% yakashumwa
Chipiri, Gunyana 25, 2011 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Kudzoka muna Kubvumbi, takazivisa kuti Emailvision yakanga yatenga SmartFOCUS. Iye zvino waGumiguru uye mhedzisiro yekubatanidzwa haina zvishoma kushamisa, kusanganisa Email, Yemagariro uye Kwevatengi Njere mune imwe mhinduro. Emailvisionvision yakazivisa zviri pamutemo kuburitswa kweCampaign Commander Enterprise. SmartFOCUS yaive nemutengi-server mhinduro ine inoshamisa mushandisi interface uye yekudyara dhatabhesi iyo yakaita kuti zvive nyore kuvaka terabyte-saizi dura dura asi nyore kuisanganisa uye kuisanganisa iwo mune chaiyo-nguva -
Takave nemufaro wekusangana uye kushanda nevatungamiriri mumakambani ese ari maviri gore rapfuura: Emailvision uye Chinangwa Marketer. Ini ndakamhan'arira paEmailvision pakutanga kwegore nekuti ndakanakidzwa nekuedza kwavo kuita nyika dzepasi rose. Kushanda kwavo hakusi kwepasirese chete, ndizvo zvakaitawo nguva dzenzvimbo… nzira yese kusvika kune anonyorera! Iyo kambani iri kusangana pamusoro pe40% kukura gore pamusoro pegore uye nekukurumidza kukura mumisika muSouth America uye
ONA: Emailvision ikozvino iri chikamu cheSmartFocus. Kunyange chiri chokwadi kuti magamba ekumusha kwedu, ExactTarget, ave kuwedzerwa kuUnited Kingdom neAustralia, vachiri kungogumira kune nyika dzinotaura Chirungu. Pakutanga gore rino, takave nemukana unoshamisa wekusangana neane tarenda hutungamiriri timu yeEmailvision. Inowanikwa muClichy, France (kunze kweParis), Emailvision inogona kunge iri yega yega mupiro webasa reemail. Yadzo mushandisi interface inogona kumhanya muUS Chirungu, UK
Muvhuro, Ndira 19, 2009 Chipiri, Gunyana 7, 2014 Douglas Karr
Vangani vanhu vari kutsvaga munhu anoziva zvaunoita? Zvino… vanhu vangani vari kukutsvaga iwe? Saka… kana iwe uchida kuwanikwa paInternet pane zvaunoita, nei ungatenga zita rako sezita rezita uye kuisa blog pariri? Unogona kusada. Tenga zita rezita rinotaridza zvaunoita. Kusvikira vanhu vaziva kuti iwe ndiwe ani, ndozvinoita sei